Maxaa ku khasbay Shiinaha in laacibiin u safata koobka Adduunka uu dibedda ka doonto? - BBC News Somali
Image caption Elkeson oo tababaranayo
Image caption Marcello Lippi ayaa hadda ah tababaraha xulka Shiinaha
Image caption Nico Yennaris ayaa asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha
Image caption Dowladda Shiinaha ayaa dedaal ugu jirta ka guul gaarida koobka adduunka
Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping ayaa daaha ka rogay qorshe cusub oo lagu ballaarinayo laguna horumarinayo barnaamij lagu tababarayo dhalinyarada, si ay gacan uga geystaan mustaqbalka dalkaas, balse ciyaartoyda ajaaniibta ah waa kuwa la doonayo "in lagu gaaro guusha msutaqbalka dhaw".
Yennaris ayaa la soo tababarty kooxda Arsenal, halka Hou Saeter-na uu ka mid ahaa koox ka dheesha dalka Norway. Labadooduba waxay usoo dheleen kooxaha da'da yar ee naadiyadaas.
Image caption Ricardo Goulart ayaa isna asal ahaan ka soo jeeda Bazil
Image caption Elkeson ayaa sanadkii waxaa uu qaataa11 milyan oo doolar.
Sannadihii ugu dambeeyay waxaa sare u sii kacayay ajaanibta u wareegeysa dhanka Shiinaha, balse tusaale ahaan, go'aanka ah in qofka uu wareejiyo basaaboorkiisa Ingiriiska ama Norway, si uu ugu dheelo xulka Shiinaha waxay muujineysa awoodda isa soo tareysa ee basaboorka dalkaas uu yeelanayo ama ugu yaraan sida dalkaas ay uga go'an tahay ka guul gaarista ciyaaraha koobka adduunka.
Image caption Waxaa muhiim ah in ciyaartoyga uu yaqaano luuqadda Shiinaha